Akanyanya kunaka Jailbreak tweaks yekutamba Pokémon GO | IPhone nhau
Akanyanya kunaka Jailbreak tweaks yekutamba Pokémon GO
Ignacio Sala | | Jailbreak, IPhone mitambo
Mushure mekungopfuura kwevhiki rekumirira, Pokémon GO yatove muEurope yese, kuwedzera kuUnited States, New Zealand neAustralia. Vashandisi veJailbroken vari kuona kuti hapana chimwezve chekuisa nekumhanyisa Pokémon GO pane chishandiso iyo app inovhara pasina chikonzero chiri pachena. Izvi zvinoitikawo pamidziyo yeAroid iyo yakadzika midzi. Zvinotaridza kuti Nintendo inoda kudzivirira zvakanyanya sezvinobvira kuti vashandisi vanogona kubiridzira kuburikidza neJailbreak kana kuburikidza nemidziyo yeAroid midzi.
Neraki, vashandisi vejere vanogona ikozvino kunakidzwa nemutambo uyu pasina dambudziko. Mune ino posvo tinokuzivisa iwe nezve iyo tweak ichatibvumidza isu kutamba pasina matambudziko uye vamwe izvo ichatipa zvinowedzerwa kuti tinakirwe zvakanyanya nePokémon GO, sekureba sekurwiswa kweDDoS kwakatambudza maseva ekambani kupera kwevhiki kwese.
3 Pokemon kukiya
Iyo PokePatch tweak ndiyo yatinofanira kuisa kutanga kana tisingakwanise kutora zvishandiso zvedu kumhanya Pokémon GO nenzira kwayo. Mutambo otomatiki anotarisa kana chishandiso kwainoiswa chiri jailbroken kubvumira kuitiswa kwayo. Asi nekuda kweiyi tweak mutambo unodzivirira cheki yekutarisa kuti iitwe.
Kana isu tichida kunakirwa Pokémon GO mumba medu pasina kuenda kunze, iyo PokemonGoAnywhere tweak inotibvumidza kufamba kuenda kunzvimbo ipi neipi mumutambo nekungodzvanya pachiratidziri. Dambudziko ratakatarisana naro tichishandisa iyi tweak ndeyekuti kana Niantic ikaiona, inogona kuvhara account yatinoshandisa kunakidzwa nemutambo uyu. Parizvino, panga pasina ruzivo nezvazvo, asi iwe unofanirwa kungwarira kungoitika.
Iyi tweak inobvumira tamba Pokémon GO zvakananga kubva kukiya skrini yeyedu kifaaChero bedzi isu tisina hanya zvakanyanya nezve hupenyu hwebhatiri, sezvo iyi tweak ichiita kuti iwe unwe chaizvo. Kuti tishandise iyi tweak, isu tinofanirwa kushandura pasiwedhi kudzivirirwa.
Iyo repo pane ese aya ma tweaks aripo ndeye http://repo.ziph0n.com repo izvo zvakamboitika iwe uchafanirwa kuwedzera Cydia kukwanisa kurodha tweaks.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » Akanyanya kunaka Jailbreak tweaks yekutamba Pokémon GO
Izvo zvakakwana kukurudzira nyeperaGPS maapplication kubiridzira, saka zvinosetsa sei kutamba? Gare gare apo kurambidzwa kunouya, hapana anochema 🙂
Nyaya yacho yanga isiri Nintendo, mumwe mutambo weNiantic (Ingress) wakafanana neuyu kubva pokemon enda kunyangwe neimwe nzira yekutamba, waisakwanisa kuita zviito izvi, pane zvirongwa zvinokwanisa kudzora dziviriro dzavanoisa asi iyo nyaya ndeyekuti vanhu vanoenda kunofamba kuti vatambe uye vanakirwe nemutambo sezvavakagadzirirwa nevagadziri.
kunyangwe vazhinji vachimanikidza kutyora mitemo 😀 hehehe
Domingo Gomes akadaro
Ini ndinokuudza kuti ini ndaona zvimwe zviitiko zvevanhu vachishandisa PokemonGoAnywhere uye neaka Pokémon maakaundi akavharirwa 🙂
Pindura Domingo Gomes
Uye iwe unofanirwa kutuka kuti utaure kuti haufarire chinyorwa ...
Avo venyu vasingade chinyorwa ichi .. ..zviri nyore kusachiverenga…
SoftBank inobata ARM kwemamiriyoni makumi matatu nemaviri
Katy Perry Anoburitsa Imwe "Simuka" Zvingori zveApple Music Uye iTunes